Liisaska guryaha Iibka iyo Ijaarka gudaha Delhi
1 - 10 ee 21700 Liisaska
Delhi (Af-Ingiriis:; Hindi: [ˈdɪlːi] Dillī; Punjabi: [ˈdɪlːi] Dillī; Urdu: [ˈdeɦli] Dēhlī), waxay si rasmi ah u tahay Caasimadda Qaranka ee Delhi (NCT), waa magaalo iyo dhulal midowga India ah oo ay kujirto New Delhi , caasimada Hindiya. Waxaa xaduud ku leh gobolka Haryana saddex geesood iyo Uttar Pradesh dhinaca bari. NCT-du waxay daboolaysaa aag dhan 1,484 kiiloomitir laba jibaaran (573 sq mi). Marka loo eego tirakoobka 2011, dadka ku nool magaalada Delhi ee saxda ah waxay ka badnaayeen 11 milyan, kan labaad ee ugu sarreeya Hindiya ka dib Mumbai, halka guud ahaan dadweynaha NCT-ga ay ahaayeen 16.8 milyan. Aagga magaalada Delhi waxaa hadda loo tixgaliyaa inuu ka sii gudbayo xuduudaha NCT, waxaana ka mid ah magaalooyinka dariska la ah ee Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon iyo Noida oo ku yaal aag hadda loo yaqaan Gobolka Capital State (NCR) oo lagu qiyaasay 2016 dadka ka badan 26 milyan oo qof, taas oo ka dhigaysa magaalada labaad ee adduunka ugu weyn adduunka sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Laga soo bilaabo 2016, qiyaasahii ugu dambeeyay ee dhaqaalaha metro-ka ee aaggiisa magaaladu waxay ka tirsanaan jireen Delhi midda ugu badan ama ta ugu badan ee wax soo saarka metrooga Hindiya. Delhi waa magaalada labaad ee ugu qanisan gudaha Hindiya kadib Mumbai waxayna hoy u tahay 18 billionaire iyo 23,000 millionaire. Delhi waxay ku jirtaa kaalinta shanaad ee dowladaha Hindiya iyo dhulalka midowga ee tusaha horumarka aadanaha. Delhi waxay leedahay GDP-ta labaad ee ugu sarreysa dalka Hindiya. Intaa waxaa sii dheer, waxaa loo arkaa mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ee ugu wasakhaysan adduunka iyada oo si gaar ah looga fiirsado arrimaha. Magaalada Delhi waxay si joogto ah u deggenaa tan iyo qarnigii 6-naad ka hor. Iyada oo loo marayo inta badan taariikhdeeda, Delhi waxay u adeegtay sidii caasimado boqortooyooyin iyo boqortooyo kala duwan, gaar ahaan Delhi Sultanate iyo Boqortooyada Mughal. Magaalada ayaa la qabtay, la wareejiyay oo dib loo dhisay dhowr jeer, gaar ahaan xilligii dowladii dhexe, iyo Delhi casriga ah waa dhowr urur oo ku baahsan magaalooyinka waaweyn. Dhul midowga ah, maamulka siyaasadeed ee NCT ee Delhi maanta wuxuu aad ugu egyahay dowlad India, oo leh goleheeda sharci, maxkamad sare iyo gole fulineed oo wasiiro ah oo uu hogaaminayo Wasiirka Amniga. New Delhi waxaa si wada jir ah u maamula dowladda dhexe ee Hindiya iyo dowladda hoose ee Delhi, waxayna u shaqeysaa caasimada dalka iyo sidoo kale NCT ee Delhi. Delhi waxay martigelisay Koobkii ugu horreeyay iyo kii 9aad ee Aasiya 1951 iyo 1982, siday u kala horreeyaan, 1983 Summit NAM, 2010 Raga Hockey World Cup, Ciyaaraha Commonwealth, 2012 Shirka BRICS wuxuuna ahaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn martigelinta koobkii Cricket World Cup 2011. Delhi sidoo kale waa xarunta Gobolka ee Gobolka Capital (NCR), taas oo ah 'qorshe gobal goboleed gaar ah' kaas oo uu abuuray Sharciga Maamulka Gobolka ee Qorshaynta Gobolka ee 1985.